Al-Shabaab oo Odayaal iyo Dhalinyaro Ku Xir Xiray Deegaanka Halgan Ee Gobalka Hiiraan – STAR FM SOMALIA
Xoogaga Ururka Al Shabaab oo dib ula wareegay gacan ku haynta Deegaanka Halgan Ee Gobolka Hiiraan, ayaa waxay ku xir xireen Odayaal iyo dhalinyaro ay ku eedeyen inay la shaqaynayen Ciidamada Dowladda iyo Amisom.
Ciidanka Midowga Afrika iyo Ciidamada Dowladda oo bilowgii bishan Ururka Al Shabaab kala wareegay gacan ku haynta Deegaanka Halgan, ayaa aroornimadii hore ee shalay isaga baxay.
Xoogaga Shabaab oo barqanimadii shalay dadka kula hadlay Fagaare Deegaanka Halgan ku yaala, ayaa waxay ka sheegeen in tallaabo laga qaadi doono cidii lagu helo inay la shaqeysay Ciidamada Huwanta.
Hadalka Shabaabka oo walwal abuuray bulshada, ayaa waxay halkaasi ka sameeyen hawlgal ay ku qab qabteen Odayaal Dhaqameedyo iyo niman dhalinyaro ah, kuwaa oo ay ku hayan Xarun ay kaga sugan yihiin Halgan.
Nin degan Deegaanka Halgan, ayaa sheegay Odayaasha Dhaqanka ee la xiray in qaarkood lagu eedeeyay, iyagoo ka qaybgalay kulamo ay la qaateen Ciidamada Dowladda iyo Xoogaga Amisom.
Afhayeenka Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan, lana socda Ciidamada Huwanta, Nabadoon Faarax Cabdi Waare, ayaa sheegay inay Ciidamada Amisom kaga diggeen inay ka baxaan Deegaankaasi, si aynaan Shababaku dhibaato ugu gaysan bulshada, haddii ku soo laabtaan Halgan.
Gudoomiye Ku Xigeenka Maamulka Gobolka Hiiraan, Salaad Xasan Cabdi, ayaa sheegay in Ciidamada Huwanta inay dib ugu laabanayan Deegaanka Halgan, marka ay soo gaba gabeeyan hawlgal uu sheegay inay ugu amba baxeen Deegaanka Booco.